विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर - निष्पक्षखबर
विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर
विराटचोकः आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर रहेको छ ।
यस्तो छ नेपाल राष्ट्र बैंकले आज कात्तिक ९ गतेका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दरः
कोलम्बियामा १० लाख तथा इटली र चिलीमा ५ लाख पुगे कोरोना संक्रमित
कोभिड अस्पताल धरानमा ६२ वर्षीया कोरोना संक्रमितको मृत्यु
तास खेल्ने ७ जना पक्राउ
उर्लाबारीः मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर ९ बाट तास खेल्ने ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । स्थानीय एक घरमा जुवातास खेलिरहेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बिहीबार साँझ ६ बजे उनीहरुलाई पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरुको साथबाट ३ लाख २५ हजार १ सय ५५ नगद पनि बरामद भएको बताइएको छ । पक्राउ पर्नेमा उर्लाबारी नगरपालिका–९ का ४८ वर्षीय बाबुराम कार्की, २८ वर्षीय डम्बर बहादुर लिम्बू, उर्लाबारी नगरपालिका–८ का २६ वर्षीय विमल डाँगी, २७ वर्षीय दिवान मगर र ३२ वर्षीय गोविन्द पुरी रहेका छन् ।
त्यस्तै उर्लाबारी नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय विष्णु राउत र केपिलासगढी गाउँपालिका–५ खोटाङका ६७ वर्षीय कुबिरमान तामाङ रहेका छन् । पक्राउ परेका सातै जनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले जनाएको छ ।
के हो गणतन्त्र ?
‘धेरै वर्ष अगाडिदेखि राजाले मात्रै एकोहोरो राज गरे हामीमाथि । राजतन्त्र रहुञ्जेल हामी जनता सधैँ भोका, नाङ्गा रहिरहन्छौँ । जबसम्म राजा फ्याँकिदैन तबसम्म हामी जनता सधैँ गरिबीकै रेखामुनि पिल्सिरहने छौँ । अब यो राजतन्त्र नै देश बाट सधैँको लागि हटाएर जनताको अधिकारको तन्त्र गणतन्त्र ल्याउनैपर्छ…’ भन्दै झुटो अफवाह फैलाएका अहिलेका कयौ छोटे राजाहरुको कुरालाई विश्वास गरेर केही वर्ष अगाडि नै राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र ल्यायौँ । तर हामी जनताले अहिलेको गणतान्त्रिक देशबाट खोइ कुन किसिमको गणतन्त्रको महसुस गर्न पाइयो र ?
हिजोका दिनमा नारायणहिटीमा राजा रहँदा पनि हामीलाई उस्तै नै थियो । अनि आजको दिनमा शीतल निवासमा राष्ट्रपति रहनुमा केही फरक छ र ? जुनसुकै पनि बेला बाटोमा त्यही साइरनका साथ अघिपछि चम्किला गाडीहमा प्रहरी, सेनाका साथ तामझाम उस्तै छैन र ?
पहिले बाइसी, चौबिसी राज्य थिए अनि ती अलगअलग राज्यमा अलगअलग राजाहरुले शासन गर्दथे भनेर पढिएको थियो । अनि ती सबै राज्यहरुलाई पृथ्वीनारायण शाह नाम गरेका साहसी राजाले एकीकृत गरी एउटै राज्य बनाएको रे, जुन चाहिँ नेपाल रे । अनि आज त्यही एउटा नेपाललाई फेरि टुक्र्याएर सात राज्य बनाएनन त ? हरेक राज्य अनि हरेक गाउँगाउँमा पिर्के सलामी रे । अनि अहिले पनि चम्किला गाडीमा सवार भई अघि र पछि प्रहरी र सेना कुदिरहेका छैनन् र ?
आफ्नै नेताले मात्रै गणतन्त्र ल्याए झैँ गर्नेहरुलाई चाहिँ पक्कै यसले राम्रो फाइदा गरेको छ । अझै पनि हामीजस्तो साधारण जनताले कहीँ कतै कुनै जागिर गर्नुपर्यो भने फलानो र तिनालुको खुट्टैसम्म नि समाउनुपर्ने हुन्छ । अनि जसको धेरै मुख भयो त्यो छानिन्छ । जसको बोल्दिने कोही हुँदैन ऊ फालिन्छ । यही हो त गणतन्त्र ?
कुनै छोरी चेली एक्लै स्कुल होस् वा कलेज वा आफ्नो व्यक्तिगत कामले एक्लै कतै जानुपर्यो भने त्यो छोरी सकुशल घर फर्किन्छे कि फर्किन्नँ भन्ने त्रास भई नै रहन्छ हरेक आमाबाबुलाई । कुनै चेली बीच बाटोमा बलात्कृत हुन्छे अनि उसको त्यहीँ हत्या पनि हुन्छ । तर सरकार त्यसको तमासा हेरेर बस्छ । अझ माथिबाट उर्दी जारी हुन्छ, ‘अरु देशमा हेरी हाम्रो देशमा बलात्कार र हत्याको घटना एकदम न्यून छ ।’ यही हो त गणतन्त्र ?
कुन कुराको मागमा टायर बालेर विरोध गरिएको हो भन्ने कुरा त्यो बाटोमा टायर बाल्नेलाई नै थाहा हुदैन । तर ऊ लागिपरेर विरोध जनाइरहेको हुन्छ । आफ्नै कामले कोही मान्छे बाटोमा आफ्नो साइकल, मोटरसाइकल लिएर हिँडिरहेको छ भने बिनाकारण उसको सवारी साधन नै जलाइन्छ । यही हो त गणतन्त्र ?
राजतन्त्र रहुञ्जेल हामी कहिल्यै नि माथि उठ्न सकेनौँ भन्ने ए देशका धमिरा हो अनि तिमीहरुले चाहिँ खोइ कसलाई माथि उठायौ त ? के तिम्रा अघिपछि गरेर हिँड्ने दुई चार जनाको सात पुस्तेलाई मात्रै हेरेर हुन्छ र ? अरु कोही जनता नै छैनन् र यो देशमा ?
थोरै ज्वरो आएजस्तो मात्रै भयो भने पनि उपचार गर्नको लागि तिमीहरु आफ्नै देशमा उपचार नगरेर सबैभन्दा राम्रो र महङ्गो देश छानेर जान्छौ, त्यो पनि आफ्नै देशको सम्पति प्रयोग गरेर । अनि जनता बिरामी हुँदा भन्ने गर्छौ सरकारले हेर्न सक्दैन । गरिब जनताको भोट पाएर ठूलो भएको नेता साधारण बिरामी हुँदा पनि देशको कयौ सम्पत्ति लुटिरहेको हुन्छ अनि त्यही भोट दिने गरिब जनता बिरामी हुँदा सामान्य अस्पतालमा पनि उपचार हुन नपाइ यता र उता भाँैतारिएर मर्छ । यही हो त गणतन्त्र ?
गाउँ बनाउँछु, देशै बनाउँछु भन्ने त्यो गाउँको नेता हिजो भोट माग्न आउँदा उसलाई कुन माटो, कुन हिलो थाहा हुँदैन थियो । सबै सरह हिँड्ने गथ्र्याे । जब उसले जितेर गयो अनि कहिलेकाहीँ त्यही गाउँमा आउनुपर्दा अब उसको जुत्ता र लुगामा थोरै नि माटो लाग्छ कि भनेर गाडी बाट ओर्लिएसँगै रातो कार्पेट बिछ्याउनु पर्ने भएको छ । अनि ऊ उभिने ठाउँमा रातै पिर्का हुन्छ । यही हो त गणतन्त्र ?
कृषिप्रधान देश भन्दै सदनमा भाषण छाँट्ने ए छोटे राजाहरु हो कृषकको लागि बिउबिजन अनि मल प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का छैन है ? कृषकको लागि बिउबिजन अनि मल दिन नसक्ने सरकारले सर्प पाल्नेलाई चाहिँ ७० करोड दिन सक्छ त ? यही हो त गणतन्त्र ?
जनता भोकभोकै सडकमै मर्न लागिसके । कसैले दया गरेर एक छाक खुवाएको छ भने यो कामले अहिलेको सरकारलाई लाज भयो रे । अनि त्यो ७० करोड कुम्ल्याएको टेप रेकर्ड बाहिर आउँदा चाहिँ लाज भन्ने शब्द कता लुकेको थियो नि ? सारा जनतालाई झुक्याएर सम्पत्ति कमाउने खेल मात्रै हो त ? यही हो त गणतन्त्र ?
जनताबाट अस्वीकार भई चुनावमा हारेको मान्छेलाई मन्त्री बनाउन अलग्गै कानुन भएको अनि जनताले रुचाएको मान्छेलाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गर्नको लागि कानुन नै नभएको रे । के यही हो त गणतन्त्र ?
म राजावादी होइन । न त म अहिलेको गणतन्त्रको समर्थक नै हो । साँच्चै भन्नुपर्दा मैले त अझैसम्म गणतन्त्र भनेको के हो बुझ्न सकेको नि छैन । गणतन्त्रमा त सबै जनतालाई बराबर रुपमा हेरिन्न र ? तर खोइ त त्यो ?
आखिर के हो त गणतन्त्र ?
१७०३ जना थपिए संक्रमित, १२३६ जना निको
विराटचोकः गत २४ घण्टामा नेपालमा १ हजार ७ सय ३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या २ लाख २९ हजार ३ सय ४३ जना पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार थप १ हजार २ सय ३६ जना संक्रमित निको भएसँगै संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या २ लाख ९ हजार ४ सय ३५ जना पुगेको छ । थप २३ जनाको मृत्यु भएसँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ४ सय ३५ जना पुगेको छ ।
१७ हजार २ सय ३७ जना संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन् । क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या ६ सय १ जना रहेको छ । १७ लाख १० हजार ४ सय ६० स्वाबको पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ7 months ago